လမ်ပန်းမြို့ - ဝီကီပီးဒီးယား
လမ်ပန်းမြို့ (အင်္ဂလိပ်: Lampang) (Nakhon Lampang) (ထိုင်း: นครลำปาง, အသံထွက် [náʔkʰɔːn lampaːŋ]) သည် ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသ၏ တတိယမြောက်အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်သည်။လမ်ပန်းပြည်နယ်နှင့် လမ်ပန်းခရိုင်တို့၏ မြို့တော်ဖြစ်သည်။လမ်ပန်း၏ ဒေသအခေါ်များတွင် ဝီယမ် လခွန် ( Wiang Lakon) နှင့် ခီလန် နခွန် ( Khelang Nakhon) ဟုလည်း ခေါ်ကြသည်။ကုန်သွယ်ရေးနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် အချက်အချာကြသည်။လမ်ပန်မြို့သည် ဘန်ကောက်မြို့၏ မြောက်ဘက် 601 km နှင့် ချင်းမိုင်မြို့၏ အရှေ့တောင်ဘက် 101 km အကွာတွင် တည်ရှိသည်။
ထိုင်းမြောက်ပိုင်းရှိ လမ်ပန်း၏ တည်နေရာ
ကိုဩဒိနိတ်: 18°18′N 99°30′E﻿ / ﻿18.300°N 99.500°E﻿ / 18.300; 99.500ကိုဩဒိနိတ်: 18°18′N 99°30′E﻿ / ﻿18.300°N 99.500°E﻿ / 18.300; 99.500
၂၂.၁၇ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၈.၅၆ စတုရန်းမိုင်)
၂၆၀၀/km၂ (၆၈၀၀/sq mi)
၇ အထိမ်းအမှတ်နှင့် ခရီးသွား ဆွဲဆောင်မှုများ
လမ်ပန်းမြို့သည် ဝမ်မြစ်၏ ချိုင့်ဝှမ်းနေရာတွင် တည်ရှိပြီး အနောက်ဘက်တွင် ခွန်တန်တောင်တန်း အရှေ့ဘက်တွင် ဖီပန်နမ်တောင်တန်းတို့က အနားသတ်ထားသည်။ကျောက်ဖယားမြစ်၏ အဓိက မြစ်လက်တက်တစ်ခုဖြစ်သော ဝမ်မြစ်မှာ မြို့ကို ဖြတ်၍ စီးဆင်းသည်။မြို့မှာ ဝမ်မြစ်၏ တောင်ဘက်အခြမ်းတွင် အဓိကတည်ရှိသည်။သို့သော် မြို့၏မူလအပိုင်းများမှာ မြစ်၏ မြောက်ဘက်ခြမ်းတွင် တည်ရှိခဲ့သည်။ယနေ့ခေတ်၏ လမ်ပန်းမြို့၏ မြို့လယ်ခေါင်ဒေသမှာ ဘွန်ရွက်လမ်းမနှင့် ပဟွန်ယွန်တင်လမ်းမအတိုင်း ဝမ်မြစ်၏ အရှေ့တောင်ဘက်တွင် တည်ရှိသည်။
လမ်ပန်းမြို့မှာ အနီးအနားရှိ အခြားပြည်နယ်များကဲ့သို့ပင် ခြောက်သွေ့သော ရာသီဥတုရှိသည်။နောက်ဆုံးမိုးရွာပြီးနောက် နိုဝင်ဘာလမှ မတ်လအထိမှာ ဆောင်းရာသီဖြစ်သည်။လေအေးများမှာ ဆိုက်ဘေးရီးယား မှ တိုက်ခိုက်လာကြပြီး ညအချိန်တွင် အပူချိန်မှာ ၁၀ဒီဂရီ ဆဲဆီးယက် အထိ ကျဆင်းတတ်သည်။သို့သော် ထိုသို့ ကျဆင်းမှုမှာ အတော်ရှားပါးသည်။ဆောင်းရာသီမှာ ခြောက်သွေ့ခြင်း၊ နေသာခြင်း၊ ၊ သာယာပြီး အေးချမ်းသည့် စရိုက် လက္ခဏာများရှိကာ တစ်ခါတစ်ရံတွင် မြူဆိုင်းသော ညများကို ုံရတတ်သည်။ မကြာသေးမီ ကာလများက အပြာရောင် ကောင်းကင်မှာ ကောက်ရိတ်ပြီး မီးရှို့မှုများ၊ကျောက်မီးသွေးစက်ရုံများမှ မီးခိုးမှုန်များဖြင့် ပြည့်နေတတ်သည်။
နွေရာသီမှာ မတ်လမှ ဇွန်လအထိဖြစ်သည်။ပြီလအတွင်း အပူချိန်မှာ ၄၀ ဒီဂရီ ဆဲဆီးယက်အထိ မြင့်တက်လေ့ရှိသည်။မွန်းလွဲ အချိန်များတွင် မိုးကြိုးမုန်တိုင်းများနှင့် မုန်တိုင်းကြီးများ ကျရောက်လေ့ရှိသည်။
မိုးရာသီမှာ ဇွန်လမှ နိုဝင်ဘာလအထိဖြစ်သည်။သို့သော် မေလကတည်းကပင် သိသိသာသာ မိုးရွာလေ့ရှိသည်။လမ်ပန်းမြို့မှာ အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ဒေသများအောက် မိုးရေချိန် လျော့နည်းတတ်သည်။ထို့ကြောင့် ရေကြီးမှုကို သိပ်၍ မခံစားရပေ။
လမ်ပန်းမြို့ (၁၉၈၁ - ၂၀၁၀) အတွက် ရာသီဥတု အချက်အလက်များ
လမ်ပန်းမြို့မှာ လန်န တိုင်းပြည်၏ အဓိကမြို့ဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော် ၎င်း၏ သမိုင်းဆိုင်ရာများမှာ ယခင် အစဉ်အလာ အစိုးရရုံးမြို့များဖြစ်သော ချင်းမိုင်မြို့ သို့မဟုတ် ချင်းရိုင်မြို့၏ လွှမ်းမိုးမှုများကို ခံရသည်။ထိုမြို့များ၏ သမိုင်းကြောင်းမှာ ရာဇဝင်များအတွင်း လူသိများလှသည်။ဆယ်စုနှစ်များအကြာ ၁၇ရာစုမှ ၁၈ရာစုနှစ်များအတွင်း မြန်မာပြည်မှ အင်းဝတိုင်းပြည်နှင့် အယုဒ္ဓယတိုင်းပြည် နှစ်ခုလုံးနှင့် စစ်ဖြစ်ခဲ့ရာ လန်နတို့မှာ အစစအရာရာ ကျဆင်းခဲ့ပြီး အထူးသဖြင့် လူဦးရေ ကျဆင်းခဲ့သည်။အဆုံးတွင် မြန်မာတို့လက်အောက်သို့ ကျရောက်ခဲ့ရသည်။၁၈ရာစု နှောင်းပိုင်းတွင် လမ်ပန်းဒေသခံ နမ်သစ်ချန်နှင့် အပစ်အခတ် ကျွမ်းကျင်သူများက မြန်မာတို့လက်အတွင်းမှ ပြန်လည် ရယူခဲ့သည်။ဘန်ကောက်နှင့် မဟာမိတ်ဖွဲ့ကာ နမ်သစ်ချန်၏ သားစဉ်မြေးဆက်မှာ လန်နဒေသများ၏ အုပ်ချုပ်သူများဖြစ်လာသည်။ထိုသို့ အုပ်ချုပ်ကြသည်မှာ ဆိုင်ယမ်ဘုရင် ရာမ၅ဘုရင်ဖြစ်သူ ချူလာလောင်ကွန်းမှ ဆိုင်ယမ် တိုင်းပြည် လက်အောက်သို့ သိမ်းပိုက်ခဲ့သည့် အချိန်အထိဖြစ်သည်။
အစဉ်အလာအရ ဆန်စပါး စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းအပြင် နာနတ်သီးစိုက်ပျိုးခြင်း၊ ကြံစိုက်ပျိုးခြင်းများမှာ လန်နပြည်နယ်၏ အဓိက စိုက်ပျိုးရေးဖြစ်သည်။ မဲမို့ခရိုင်တွင် များစွာသော ကျောက်မီးသွေးညို ထုတ်လုပ်ရေးရှိသည်။ထိုနေရာမှာ ကျောက်မီးသွေးသုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေး စက်ရုံများအတွက် ကြီးစွာသော အထောက်အပံ့ပေးသည်။ သို့သော် ဒေသခံများအတွက် များစွာသော လေထုညစ်ညမ်းမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။လမ်ပန်းမှာ ကာအိုလင်းများလည်း ထွက်ရှိသည်။၎င်းကို ကြွေထည် လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုသည်။သမိုင်းအရ သစ်ထုတ်လုပ်ရေးမှာ အရေးပါလှသည်။အနီးအနားရှိ ဖာရေးမြို့နှင့် လမ်ပန်းမြို့မှာ ကျွန်းသစ်များ ရှိကြသည်။သစ်တုံးများကို ဘန်ကောက်သို့ပို့ရန်အတွက် မြစ်သို့ သယ်ဆောင်ရန် များစွာသော ဆင်များကို အသုံးပြုကြသည်။ထို့ကြောင့် ထိုင်းဆင်ထိန်းသိမ်းရေးစင်တာ၏ ယခင်ဌာနဖြစ်သော ဆင်ကျောင်း တည်ရှိသည်။လမ်ပန်းရှိ သက်တမ်းရင့်ပြီဖြစ်သော ကျွန်းသစ်များမှာ ခုတ်ပြီးဖြစ်ကြသည်။
လမ်ပန်းမြို့ကို ထိုင်းနိုင်ငံတွင် မောင်း ရော့ မ ("mueang rot ma") ဟုလည်း ခေါ်ကြသည်။အဓိပ္ပါယ်မှာ မြင်းရထားတွဲမြို့ ဖြစ်သည်။၎င်းကို အချို့ထိုင်းများက နောက်ဆုံး နတ်ဘုံနတ်နန်းအဖြစ် စဉ်းစားကြသည်။ချင်းမိုင်ပြည်နယ်၏ အရှေ့တောင်ဘက် 100 km အကွာတွင် တည်ရှိသည်။သို့သော် ဘန်ကောက်မြို့နှင့် ချင်းမိုင်မြို့များသို့ ရထားလမ်းနှင့် လေးလမ်းသွား ကားလမ်းများဖြင့် ဆက်သွယ်ထားသည်။ထိုနေရာတွင် ခရီးသွားများအနေဖြင့် ပုံမှန်သွားလာရေးအတွက် မြင်းဆွဲရထားများကို တွေ့နိုင်သေးသည်။အချို့က ၎င်းကို ပေါ်တူဂီ၊ မကာအိုများမှဟုပြောကြသော်လည်း ၎င်း၏ မူလရင်းမြစ်မှာ ကိုလိုနနီခေတ် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဖြစ်နိုင်ချေပိုများသည်။၂၀ရာစုအစောပိုင်းက လမ်ပန်းမြို့မှာ သစ်ထုတ်လုပ်ရေးအတွက် အရေးပါခဲ့ပြီး ဗြိတိသျှမြန်မာပြည်မှ ရွေ့ပြောင်းလုပ်သားများ ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။ထိုမြင်းဆွဲရထားမှာ လမ်ပန်းမြို့၏ အထင်ကရအဖြစ်ဆုံး အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်သည်။ရိုးရာပစ္စည်းများစွာတွင် တွေ့ရလေ့ရှိသည်။ လမ်ပန်းမြို့တွင် အဆင့်မြင့်ပညာသင်ရန် ကျောင်းအနည်းငယ်ရှိသည်။ယိုနတ်ကောလိပ်နှင့် သမ်မဆတ်တက္ကသိုလ်၏ ဌာနခွဲတို့ဖြစ်သည်။
လမ်ပန်းမြို့မှာ အရေးပါသော အဝေးပြေးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။ချင်းမိုင်မြို့နှင့် ချင်းရိုင်မြို့သို့ လေးလမ်းသွား အဝေးပြေးလမ်းမ ရှိသကဲ့သို့ ဖာရေးမြို့နှင့် လန်နအရှေ့ပိုင်းဒေသများသို့လည်း အဝေးပြေးလမ်းမရှိသည်။လမ်ပန်းမြို့မှာ ချင်းမိုင်မြို့သို့ ဘတ်စ်ကားဖြင့် တစ်နာရီခွဲ သွားရသည်။လမ်ပန်းမြို့မှ ၁၀နာရီကြာမြင့်သည့် ဘန်ကောက်-ချင်းမိုင် ရထားလမ်း၏ ခေတ္တ ရပ်နားရာနေရာလည်းဖြစ်သည်။ ၂၀၁၅ခုနှစ်တွင် လမ်ပန်းလေဆိပ်မှာ ဘန်ကောက် လေကြောင်းလိုင်းမှ ဘန်ကောက်သို့ တစ်နေ့သုံးကြိမ်၊ နော့ လေကြောင်းလိုင်းမှ ဘန်ကောက်သို့ တစ်နေ့လေးကြိမ် ပျံသန်းနေကြသည်။
အထိမ်းအမှတ်နှင့် ခရီးသွား ဆွဲဆောင်မှုများပြင်ဆင်
ခရီးသွားများသည် ဝပ်ဖရာသတ် လမ်ပန်း(ဘုရား)နှင့် ထိုင်းဆင်ထိန်းသိမ်းရေး စင်တာသို့လာရောက်လည်ပတ်ကြပြီး မြောက်ဘက်ရှိ ချင်းမိုင်၊ ချင်းရိုင်ဒေသများသို့ ခရီးဆက်လေ့ရှိသည်။လမ်ပန်းမြို့ရှိ နိုင်ငံခြား ခရီးသွားများ သိပိမသိလေ့ရှိသော နေရာများမှာ ပြည်တွင်း ခရီးသွားများ ရှိနေတတ်သည်။ ထိုအထဲမှ အချို့နေရာများမှာ ဝမ်ခိုရေတံခွန်နှင့် သဘာဝရေပူစမ်းနှင့် ရေတံခွန်ကြီး ပေါင်းစပ်ထားသော ချေစုန် အမျိုးသား ဥယျာဉ်တို့ဖြစ်သည်။
လမ်ပန်းမြို့လယ်ရှိ ဘုရားအများစုမှာ မြန်မာပုံစံ တည်ထားကြလေသည်။ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ၃၂ကျောင်းသာ ကျန်ရှိတော့သော မြန်မာပုံစံ ဘုရားများအနက် ၉ဆူမှာ လမ်ပန်းမြို့တွင် တည်ရှိသည်။လန်နတို့၏ လက်ရာများကို ဝပ်ဖရာခိုဒိုသိုတွင် တွေ့နိုင်သည်။ထိုဘုရားမှာ လမ်ပန်းမြို့ဟောင်းဘက်တွင်ရှိသည်။ထိုဘုရားရှိ ၁၉ရာစုခေတ်လက်ရာ ပန်းချီကားများကြောငိ့ ထင်ရှားသည်။မြို့၏ စည်းတံဆိပ်မှာအဖြူရောင်ကြက်ဖပုံဖြစ်သည်။ဝမ်မြစ်၏ အနောက်ဘက်ကမ်းတွင် တည်ရှိသော ဝပ်ဖရာခိုဒိုသိုမှာ ၁၄၃၆မှ ၁၄၆၈အတွင်း ထိုင်းနိုင်ငံ၏ မြဘုရား စံပယ်ရာလည်းဖြစ်ခဲ့သည်။ဝပ်ဖရာသတ်ချေဒီမှာ ဘုရား၏ စေတီ အဆူ၂၀ပုံစံကြောင့် ထင်ရှားသည်။
လမ်ပန်းမြို့တွင် မူကြိုများ၊ မူလတန်းကျောင်းများ၊ အထက်တန်းကျောင်းများနှင့် သက်မွေးပညာကျောင်းများ စသည့်ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများစွာရှိသည်။ကျောင်းများမှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ၊ထိုင်းဘာသာနှင့် တရုတ်ဘာသာများဖြင့် သင်ကြားကြသည်။လမ်ပန်း ရာဇာပတ်တက္ကသိုလ်၊ ရာမင်္ဂလ နည်းပညာ တက္ကသိုလ်၊ အမျိုးသားတက္ကသိုလ်နှင့် သမ်မဆတ်တက္ကသိုလ်၏ ဌာနခွဲများလည်း တည်ရှိသည်။လမ်ပန်း စီးပွားရေးနှင့် နည်းပညာကောလိပ်၊ လမ်ပန်း နိုင်ငံတကာ နည်းပညာကောလိပ်တို့မှာ နည်းပညာဆိုင်ရာ နာမည်ကျော် ကျောင်းများဖြစ်သည်။
↑ Kyaw Thein Kha, The Irrawaddy (2010-09-16). Burmese Architecture in Lampang (English Subtitle) (in Burmese). Lampang: The Irrawaddy.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=လမ်ပန်းမြို့&oldid=454534" မှ ရယူရန်
၂၃ မတ် ၂၀၁၉၊ ၀၇:၃၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။